पगरी गुथ्ने हनुमानहरुका लागि खर्चिएका केहि शब्द
लेखक -डिल्लीराज रावत
दुई बर्ष अगाडि हो । त्यो दिन एक जना सरकारी कर्मचारी (उनको नाम गोपनियताका लागि उल्लेख गरिन) ले भने (सल्यान कै कुनै एक गाउमा) यहाँ एक दलित महिलाको हत्या भएको छ तपाइहरु आउन पर्दैन ?
मैले सहज रुपमा भने ः प्रहरीलाई उजुरी दिनुस न ।
उनले भने ः प्रहरीले हत्यालाई पिडकको मिलेमतोमा आत्महत्या भएको भन्दै सर्जिमिन मुचुल्का बनाएर सेलाउन लगाए । तपाइको काम के त डिल्ली जी ?
पत्रकार जस्तो भएर भन्दा पनि पार्टीका कार्यकर्ता भएर प्रस्तुत भएका पत्रकार हनुमानजी हरु लेख्ने हात हाम्रापनि छन । पार्टीका कार्यकर्ता भएर हामीपनि पत्रकार हौ भन्दै सामाजिक संजालमा पोष्ट गरेर पत्रकारीताको खिल्ली नउडाउनुहोला । परिवर्तन कसरी आएको हो ?, किन आएको हो ? नानाभाँती लेख्दै र फोनगर्दै पत्रकारलाई थर्काउने र धम्काउने काम बन्द गर्नुहोला, पगरी गुथ्ने हनुमानजीहरु ……………. ।